အိရှိဂါဝ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan(1/1)
လယ်ကွက်တစ်ထောင်ကျော်ကျယ်ပြန့် စွာရှိနေပါသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် စက်များမဝင်ရောက်နိုင်သည့်အတွက် လယ်လုပ်ငန်းအားလုံးသည် ဒေသခံများနှင့် စေတ...
ဖွင့်ထားတဲ့ ဆာမူရိုင်းအိမ်ယာဖြစ်တယ်။ ခါဂဟန်းခေတ် တိုက်ခိုက်သူဖြစ်တဲ့ နိုမူရဒန်းဘဲအဲရှင်းဆာဒရဲ့ ဆာမူရိုင်းအိမ်ယာဖြစ်ပြီး ခမ်းနားတဲ့ အဲဒီခေ...
ဖားကျောက်၊ ဘန်းခဲအိကျောက်ဆောင် စတဲ့ ထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိတဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေနဲ့ ရေတံခွန်းလေး၊ ရာသီအလိုက် အသွင်အပြင်တွေပြောင်းလဲနေတဲ့ အရောင်အေ...
အိရှိခဝခရိုင် ရှိရာယာမမြို့ မှ ဂိဖုခရိုင် ရှိရာဂဝဂေါ့သို့ ရောက်သော စုစုပေါင်းအရှည် ၃၃ ကီလိုမီတာရှိသော အခပေးရသည့်လမ်း။ မိုမိဂျိပွင့်သည့်အခ...
တိုကျိုရှုခင်း ၁၀၀ ရဲ့ တစ်ခုအဖြစ် ရေတွက်နိုင်လောက်တဲ့ ရှုခင်းဖြစ်တယ်။ အရှေ့ အနောက် ၁ ကီလိုမီတာ ၊ တောင်မြောက် ၁. ၅ ကီလိုမီတာရှိတဲ့ သေးငယ်တ...
နိုတိုခွန်းဂေါ . ဟာတဂုအီဝ
ပင်လယ်ထဲမှာ ပူးတွဲနေတဲ့ အကြီးအသေးကျောက်တုံး ၂တုံးက အထွတ်အမြတ်ထားရာ အစောင့်အရှောက်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ အထည်အလိပ်နတ်ဘုရားက တောပုန်း...
ကျောက်ဆောင်တစ်လျှောက်များစွာစီးဆင်းကျဆင်းနေသော ရေတံခွန်ပုံစံသည် အဖွာအိုက ဆံပင်ဖြူများ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေပုံမြင်ရသည့်အတွက် ဒီနာမည်ပေးထားခြင်းဖြ...
အိရှိဂဝခရိုင် ခဂမြို့ တွင်တည်ရှိသော ရှေ့ ဟောင်းသမိုင်းကြောင်းရှိသော ရေပူစမ်းဒေသဖြစ်ပြီး ခဂရေပူစမ်းဒေသ၏ တစ်နေရာကို ဖုံးလွှမ်းထားပါသည်။ စကား...
သဘာဝတရားရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို အဓိကသက်ဝင်ယုံကြည်မှုထားပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ လေးရာသီ၇ှုခင်းတွေကို အလေးထားပြီး တောတောင်ပန်းချီကားလို ...